Ndị na-enyo enyo nke Igwefoto Ahụ-Worn nke ndị ọrụ uwe ojii | Ngwọta OMG
Ofji igwefoto mee ihe site na mmanye iwu bu isiokwu na-ese okwu. Ọ bụ ezie na teknụzụ ndị dị otú ahụ nwere ike inye aka chebe ndị uwe ojii site na ịkwụsị omume anụ ahụ na-ekwesịghị ekwesị na inye ụmụ amaala nke ebubo ebubo mpụ na-ezighi ezi na ihe akaebe, a ka na-arụ ụka banyere nghọta banyere foto ndị a.
Ihe iwere bụ na igwefoto ahụ anaghị adịcha mkpa iji dozie esemokwu ndị uwe ojii nwere na mmebe nke ndị uwe ojii, n'ihi na nhọrọ nke akụkụ agbapụ vidiyo nwere ike ọ bụchaghị na-anọchite anya eziokwu niile, foto anaghị enwe eziokwu, mana tinyekwara nsogbu nchebe nzuzo. Maka ndị uwe ojii, na mgbakwunye nsogbu nsogbu mmefu ego, igwefoto ga - eme ka ọrụ ndị uwe ojii na - arụ ọrụ dị elu, n'ihi na ọ bụ nnukwu nhazi data iji jigide, chekwaa ma nyochaa vidiyo nke igwefoto weghaara.
Iji maa atụ, amụma ọhụụ achọpụtara ga-achọ ndị ọrụ uwe ojii ka ha nye onyonyo n'ime ụbọchị 45, nke ga-eme ka ihe ndị dị ugbu a rụpụta na aga-ewepụ ihe oyiyi ọ gwụla ma ha dị oke mkpa maka ikpe.
Nchọgharị iji nweta ma dezie onyogho
Nnyocha e mere na-egosi na kamera ahụ anaghị enwe obere mmetọ na ndị uwe ojii, mana eserese nwere ike ịba uru na mkpesa ndị omempụ, na-eduga na ngwa ngwa teknụzụ ndị a ngwa ngwa.
Agbanyeghị, teknụzụ ndị a enweghị ihe ọghọm ma ugbu a ọ dị ka enwere ike gbanwee ma ọ bụ wepu ihe akaebe a n'ihi ọtụtụ ọghọm dị na ngwanrọ nke etinyere na igwefoto ahụ.
N'okwu niile, ọghọm nche nyere ohere ka onye nyocha ahụ mebie emebi, gụnyere ihichapụ ihe osise, gbanwee ọdịnaya, gbanwee usoro faịlụ, na iji nwayọ na-ebudata ihe osise ọhụrụ. gbanwere.
Nsogbu nchekwa metụtara ngwaọrụ ndị a abụrụla nke ukwuu. Mitchell kpugherekwa nsogbu nchekwa metụtara na ngwa ngwanrọ, ngwanrọ na ọrụ igwe ojii nke igwefoto jikọtara ya, yana ojiji nke nkwenye dị mfe ịkọ.
Enweghị izo ya ezo ma ọ bụ bịanyere aka na vidiyo
Onwebeghị n'ime ọnụ ala ndị a nwalere na-eji nchekwa nzuzo crypto ma ọ nweghị faịlụ ọ bụla bịanyere aka na nke ọ bụla. Ọ bụrụ na ụlọ ọrụ ndị uwe ojii chọrọ iji teknụzụ a kpokọta ihe akaebe, enweghị mbinye aka a bụ nnukwu nsogbu.
Enweghị mbinye aka, enweghị ike igosi ọdịnaya vidiyo ziri ezi ma ọ bụ nyere ya na timestamps - nke nwere ike ịma aka akaebe. N'ihi ya, ndị na - ebuso agha agha nwere ike ịgbanwe ihe onyonyo na - enweghị ike ịchọpụta ụdị aghụghọ a.
Ndị uwe ojii nwekwara ike ịnọ n'ihe ize ndụ n'ihi nsogbu ọzọ. Ewezuga ihe nlere CeeSc, igwefoto niile anwalerela nwere ikike redio nke Wi-Fi ma enweghi ike igbutu adreesị IP ndị metụtara ngwaọrụ ahụ nke ọma.
Nke a pụtara na onye na-awakpo ahụ nwere ike ịchọta onye na-ebu ha, na-eme nnukwu nsogbu maka ndị uwe ojii, karịchaa n'ihe gbasara ndị ọrụ nzuzo. A nwekwara ike nyochaa adreesị IP iji chọpụta ngwa ọrụ enwere ike na-eme igwefoto, nke nwere ike ịtụwa mwakpo ndị a tụrụ aro.
O nwedịrị ike ịwụnye sọftụwia ọjọọ na kamera ahụ, nke ga-eme ka ndị na-ebuso anyị agha mebie ọnụ, na-akpata ọgba aghara ma ọ bụ nwee nleba anya na-enweghị ihe ọmụma banyere ndị ọrụ.
Agbanyeghị, igwe mmadụ na-eweta ụfọdụ nsogbu ndị metụtara akụkụ teknụzụ, ebe nchekwa na ndezi narị narị awa vidiyo bụ ọrụ siri ike.
Nsogbu teknụzụ abụwo nsogbu kachasi ike: oge ​​ịdọrọ ihe onyonyo nwere ike ịdị ogologo, nke na-agbakwunye na ọrụ ha. Otu n'ime ihe ọmụmụ ahụ chọpụtara ịrị elu nke ọnụma nke ọkụ n'etiti ndị ọrụ uwe ojii na-eburu igwefoto ma kwuo ya na mmụba nke ọrụ.
Pikselụ foto dị ntakịrị (nde 30-40). N'okpuru ìhè anyanwụ siri ike, enweghị ike ịmata ọkụ ọkụ. Ihe akaebe a adighi adi ike. A na-eji oriọna LED kpuchie ọkụ. Nsonaazụ nke abalị na-adịghị mma, enwerekwa ọtụtụ foto adịghị adị. Ọzọkwa, sistemụ ahụ siri ike, ịdabere na ya adịghị mma, mmezi ya buru ibu, ọnụ ahịa ya dị elu, ndụ ọrụ dị mkpụmkpụ, ntinye na ndezigharị siri ike. Ndị uwe ojii elektrọnik vidiyo ahụ nwere ihe mgbaàmà nke oke ikuku okpomọkụ nke kọmputa ụlọ ọrụ mmepụta ihe ma ọ bụ kọmputa agbakwunyere.
Igwefoto dijitalụ elekwasị anya nwere ike ijide mgbe niile, kamera dijitalụ SLR nwere ike ijide mgbe niile. Mana ọnụahịa nke igwefoto SLR dijitalụ bụ oge 5-6 nke igwefoto dijitalụ elekwasị anya. Ndụ nke ọkụ eletrik adịghị anya dị ka ọkụ na-enwu ọkụ LED, ọ dịkwa mkpa ka edochi ya ugboro ugboro (ọnwa 2-3), mana nsonye ọkụ ọkụ ọkụ ọkụ elektrọnik kachasị mma.
N'ikpeazụ, ọnụahịa dị elu, ntụkwasị obi, ntụkwasị obi kwesịrị ịkwalite, ngwaahịa ahụ achọpụtara ọtụtụ nsogbu na usoro eji, ndị na-emepụta na-emeziwanye usoro ngwaahịa maka mkpa n'ezie nke Ahụ-cam.
Ọ bụrụ n ’iji ozu, ọ dị mkpa n’ihe mere n’iwu nke iwu ka ejiri ihe onyonyo gosipụta ịhe ọjọọ nke ụmụ amaala na ndị uwe ojii. N'ezie, a ghaghi agbaso ụkpụrụ nchebe data, ọkachasị, ụkpụrụ nke belata data. N'akụkụ a, ọ gaghị abịa na ngwa na-akparaghị ókè nke Body-cam. Dika okwesiri, aghaghi idozighachi onodu iwu ka ndi nsogbu nke nlere onyonyo wee banye na data ha ma ihe Bodycam abughi na uche ndi uwe ojii. Iji maa atụ, ọ ga - eche na turned na - agbanyụ Akpụ Isi na ọnọdụ ụfọdụ yana na ụmụ amaala metụtara nwere ike ikwu ka ịgbanyụọ Isi ahụ ma ọ bụrụ na ha ekweghị na ndị uwe ojii. Ugbu a, Body-cam bụ ihe iyi egwu nwere otu akụkụ, n'ihi na a na-eji ya naanị na-efu ndị amaala, n'agbanyeghị ma ndị uwe ojii na-eme iwu na-akwadoghị ma ọ bụ na ọ zaghị.
Ndị ọrụ uwe ojii na-enyo enyo site na igwe gbanwere ikpeazụ: December 2nd, 2019 by admin
Nzuzo 3189 33 Echiche Taa
Dragbacks nke ndị ọrụ uwe ojii na-eji igwefoto Ara-Worn
Otu ndị ọrụ uwe ojii si yie kamera na-emetụta nzuzo na Asia
Kwalite nkwado maka ọdịdị ihu maka mmanye iwu…
Uzo nke igwe ndi uwe ojii